Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Adduunyada Nin Nooloow Maxaa Aragti Kuu Laaban
Adduunyada Nin Nooloow Maxaa Aragti Kuu Laaban
Jan 24, 2013 SOMALI NEWS Comments Off on Adduunyada Nin Nooloow Maxaa Aragti Kuu Laaban
Waxa lama filaan ku noqotay Somalida oo dhan, khaasahaan Gadabursiga , in Somaliland looga taliyo Djibouti. Fikirkan waxa cadaynaayaa dowladan Somaliland ee ku rafanaysa natiijadan ka soo baxday doorashadii guusha u soo howsay Gadabursiga. Gormadkii Dowlada Siilaanyo u dirtay saylac waxay ku guuldaraysatay in ay qanciyaan afarta nine e beesha ciise ee laga hagaayo Djibouti. Dowlada Somaaliland iyadoo og meesha sartu ka qudhunsantahay ayay wasiiro iyagana talo ka go’in u dirtay Saylac. Waftiku iyagoo marka horaba caga jiid ku yimiday oo ka walwal qaba arintan murugsan ee ka heer saraysa ay iska hor fadhiisteen afrta nin ee Djibouti laga hagayo. Markii afartaasi nin u gudbiyeen fariitii looga soo dhiibay Djibouti waftiga, afkay iska xidheen.
Wafigii wuxuu isku maqiiqay halgii iyaga laftooda loogu talinayay. Halkii u wafdigu ka filaayay in lagu soo dhaweeyo caleemo quyan marka ay xadka Djibouti galayaan ayaa lagu amray in ay halkii ay yimaadeen ku noqdaan. Waftigan waxay la kulmeen waqti u ninkii Djibouti ka talinaaney u ku maqnaa Saudiga. Waxa la tusay wafigaas in afrata nine e Ciise ee khalka geliyey Saylac ay damaanad ka haystaan Djibouti. Markii sidaas loo niyad jabiyey ayaa maalintii dambe loo sidaayey Djibouti.
Somaalido ma filayn in Djibouti ka faaiidaysato dagaalada sugeeye ee 22 sanadood ka socda Somalia. Madaxweyne Geele waxay ahayd wanaaga u Somali u galay uun u ku ekaado. Ma ahayn in waqtigan xaadirka u Somalia ama Somaliland dhibaatooyinka ay ku jiraan uga faaiideeyo Ciise. Madaxweyne Geele wuxuu siyaasada u Somalia ama Somaliland kula dhaqmo dhex wadaaya sidii Ciise cad una la hayn uga helo Somalida. Somaaloo dhani way ogtahay in Gadabursi iyo Ciise ay tiro isku mid ah laga siiyey baarlamanka Somalia. Somaalo dhani way ogtahy in Ciise tiradaas ku heleen magaca Madaxweyne Geele ayna ku tiro hay Somaalia ku leeyihiin. Waxa laakin la yaab leh oo Somaalida ku noqotay wax lama filaan ah in Madaxweyne Geele maanta rabo dhul Somaaliyeed isaga oo og sida wadankan Djibouti ku yimiday iyo sida dhibta yare e u Ciise gacanta ugu galay. Halgankii Gobanimadoonka Djibouti wuxuu Madaxweyne Geele ka markhaati yahay in qof kasta Somali ah oo sheqeeye laga goinjiray mishaharkiisa lacag lagu taageero gobanimadoonkii Djibouti. Ciise ma gudi karo abaalka Somaalido u gashay.
Arintan saylac waxay salka ku haysaa aqalka Madaxweyne Geele. Saylac waa magaalo ka mid ah Awdal, kana mid ahaan doonta. Gobolkan Lagu tilmaamo Salal gobol jira maaha. Waa fidno Rayaale u abuuray gadabursi oo u abaal kaga doonaayey Ciise. Maantana Qayba Issaqa ka mid ihi ay rabaan in ay iyaguna abaal kaga raadsadaan Ciise. Awdal waa gobol gobolada Somalia ka mid ah mana qaybsami karo. Haddii Cisse degan yahay ayaa ka eryaaya. Haddii Ciise tiro ku helaayo kuraas ayaa u diidan. Dowladan Siilaanyo ee gaba gabada ah ayaanay isku gubin ummadaha jiraanka ee wada dhashay. Madaxweyne Geelana uu og yahay in ayna suurata gal ahayn sidan hadda wax u socdaan haddii aano cadaawad abuur ahayn.
Gadabursi kuma seexan abidkii in loo sheeganaayo qayb ka mid ah Awdal. Gadabursi markoo taariikhda dib u raaco ee u eego tan hadda ka socota Saylac wuxuu ku hadaaqaa: “ADUUNYADA NIN NOOLOW MAXAA ARAGTI KUU LAABAN.”
Faro Gelinta Dawladda Jibouti iyo Jileeca Xukuumadda Kulmiye Socdaalkii UGAASKA Samaroon Ee Magaalada Saylac